महिला कोटामा ‘क्लस्टर’ किन ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन १७, २०७६ संजुकुमारी सरबरिया
नेपाली समाज वर्णमा आधारित अनि पितृसत्तात्मक समाज हो । यसको कारण सामाजको समग्र विकासमा हामी पछाडि परेका छौं । १०४ वर्षको राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था र बहुदल व्यवस्थामा पनि महिला जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन भएन । अझ मधेशी र अन्य सीमान्तीकृत समुदायका महिला पिँधमा नै छन् । इतिहासदेखि नै उच्च जात समुदाय र बलियो राजनीतिक पृष्ठभूमिका महिला नै राज्यको मूलधारमा पुगेका छन् ।
१९७४ सालमा दिव्यादेवी कोइराला, दुर्गादेवी दीक्षित, मेलवादेवी र योगमाया कोइरालाको संयोजकत्वमा पहिलो महिला समिति गठन भयो । २००४ सालमा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा नेपाल महिला संघको स्थापना भयो । त्यस्तै पुण्यप्रभादेवीको अध्यक्षतामा २००७ साल आसपास अखिल नेपाल महिला संघको स्थापना भयो । यिनै महिलाहरूले राणाको निरंकुश शासनमा राजनीतिक अधिकारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि परिस्थिति खुकुलो भयो । र, महिला अधिकारवादी संगठनहरू सक्रिय हुनथाले । २००८ सालमा राजा त्रिभुवनले बनाएको ३५ सदस्य सल्लाहकार सभामा एकजना पनि महिला थिएनन् । यसैको विरोधमा महिला संगठन उत्रिए । फलस्वरुप २०११ सालमा पुनर्गठित सभामा चारजना महिलालाई प्रतिनिधित्व गराइयो ।
२०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा द्वारिकादेवी ठकुरानी विजय भइन् । १०९ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा विजयी उनी नै पहिलो महिला मन्त्री हुन् ।
त्यसबेला महिलाको आवाज मधुरो गरी राजनीतिमा आउँदै थियो । तर कस्ता पृष्ठभूमिका महिलाहरू अगाडि आइपुग्थे त ? मंगलादेवी गणेशमान सिंहकी धर्मपत्नी हुन् । साहना प्रधान पुष्पलाल श्रेष्ठको । उनीहरूको परिवार राजनीतिक थियो । सामाजिक गतिविधि र राजनीतिमा प्रायः राजनीतिक पृष्ठभूमिका महिलाहरू नै अगाडि थिए ।
२०१५ सालको चुनावपछि पनि धेरै समाजिक र राजनीतिक आन्दोलन भए । तर स्थितिमा परिवर्तन आएन । २०४६ को जनआन्दोलनमा मधेशबाट सरिता गिरी, चित्रलेखा यादव, रेनु यादव लगायत महिलाहरू अगाडि आइपुगे । यी महिलाका परिवार राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली थियो । अगाडि आइपुग्ने महिला उच्च जात र राजनीतिक परिवारका पृष्ठभूमिबाट बेसी थिए, छन् ।
त्यस आन्दोलनमा महिलाको भूमिका उल्लेखनीय थियो । त्यही आन्दोलनको बलमा बनेको २०४७ सालको संविधानले लिंगका आधारमा महिला र पुरुषलाई भेदभाव गर्नुहुन्न भन्ने मान्यताले कानुनी रूप पायो । प्रतिबन्धित महिला संगठनहरू पनि खुला भए । महिला सम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाहरूले महिला चेतना, विकास र परिवर्तनका कार्य थालनी गरे ।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलोपटक मधेशी, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित लगायत अन्य अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृतको राजनीतिक, संवैधानिक र सामाजिक अधिकार संविधानमा नै स्थापित भयो ।
नेपालको संविधान–२०७२ ले यी समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन आरक्षण तथा सामावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्‍यो । संघमा ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी पिछडिएका जाति, समुदायको पहुँच, पहिचान, प्रतिनिधित्व गराउने विषय ठिक हो । २०६८ को जनगणाना अनुसार मधेश र पहाडका बाहुन समुदायको महिलाको साक्षरता दर ६०.३ प्रतिशत छ । दलित मधेशी महिलाको साक्षरता दर १२ प्रतिशतमात्र छ । साक्षरता दर नै १२ प्रतिशत भएपछि दलित महिलाले कसरी आरक्षणभित्र प्रतिस्पर्धा गर्छन् ?
२०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभा–१ को चुनावमा ९ जना मधेशी दलित महिलाले समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका थिए । त्यसपछिको मन्त्रिपरिषदमा मधेशी लोकतान्त्रिक पार्टीकी रमणीदेवी राम र मधेशी जनअधिकार फोरमकी कलावती पासवान सहायक मन्त्री भएका थिए । त्यस्तै २०७० सालमा सम्पन्न संविधानसभा–२ को निर्वाचनमा ४ जना मधेशी दलित महिलाले समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए । तर २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेशी दलित महिलाको उपस्थिति शून्य छ ।
प्रश्न उठ्छ, आरक्षण र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तबाट को लाभान्वित छ ? मधेशी, दलित, मुस्लिम, जनजाति र खस–आर्य समुदायबाट आरक्षणमा कुन समुदायका महिला माथि पुगेका छन् ? तथ्यले खस/आर्य समुदायका महिलाले आरक्षणको फाइदा बढी लिएको देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ ले समानुपातिक निर्वाचनमा मधेशीका लागि १५.३ प्रतिशत र थारुका लागि ६.६ प्रतिशत सिटको व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै मुस्लिमको लागि ४.४ सिटको व्यवस्था गर्‍यो । यसरी ‘क्लस्टर’हरू छुट्याइए । तर महिलाका लागि विभिन्न ‘क्लस्टर’ छुट्याइएन । यसरी ‘क्लस्टर’ नछुटिँदा मधेशी दलित, मुस्लिम र अन्य जनजातिका महिलाहरू पछाडि छुटे । ३३ प्रतिशतमा कति प्रतिशत खस/आर्य समुदायका महिलालाई, कति मधेशी दलित महिलालाई वा अन्य सीमान्तीकृत समुदायका महिलालाई भन्ने छुट्याउनेतिर ध्यान दिइएन ।
एक त पतृसत्तात्मक संरचनाले आम महिलालाई अघि आउन दिँदैन । त्यसमाथि सीमान्तीकृत समुदायका महिलालाई त झन् राजनीतिक दलले नै पेलेको छ । राजनीतिमा मधेशी दलित महिलाका आवाज कसले उठाउने ? निर्णय लिने कुर्सीमा पुरुष हुन्छ, कोही–कोही महिला पुगे पनि तिनीहरू दलित वा अन्य सीमान्तीकृत समुदायका महिला हुन्नन् । त्यसैले संविधानको मर्मलाई जीवित राख्न महिला आरक्षणमा छुट्याइएको कोटालाई थप ‘कलस्टरिङ’को आवश्यकता छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ ०९:०४
फाल्गुन १७, २०७६ विमल निभा
वर्तमान सूचना एवं सञ्चारमन्त्री कमरेड गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका बिछट्टै कृपापात्र थिए । त्यसकारण उनी प्रधानमन्त्री कमरेड ओलीका पकेट बुक संस्करण नै कहलाउँथे । वास्तवमा कमरेड बाँस्कोटाका सारा हावभाव, बोलीवचन र कामकाजले यसको दह्रो पुष्टि पनि गर्थ्यो । हो, उनी ससानो टाइपका कमरेड ओली नै थिए । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री कमरेड ओलीलाई कुनै ठूलो साइजको कमरेड गोकुलप्रसाद भन्न खोजिएको चाहिँ होइन नि !
सम्भवतः प्रधानमन्त्री कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको कोटको पकेटमा ठ्याक्कै अटाउने भएकोले कमरेड गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई उनको पकेट बुक संस्करण भनिएको हो । यही साँचो हुनुपर्छ । त्यसउसले गाँठी कुरो प्रधानमन्त्री कमरेड ओलीको अन्तरंग पकेट हो । त्यसभित्रको एकथान जिनिस गोकुलप्रसाद होइन । जे भए पनि मलाईचाहिँ प्रधानमन्त्री कमरेड ओलीको सरकारी पकेटको सन्दर्भमा हठात् ‘यती’को स्मरण हुने गर्छ । मेरो तात्पर्य कुनै हिमालमा बसोबास गर्ने हिममानव यती नभएर एक समयको खासा चर्चित ‘यति पकेट बुक’ हो । त्यसबखत राजधानी, काठमाडौंबाट प्रकाशित ‘यति पब्लिकेसन’का पकेट बुकहरू बडो चाखपूर्वक पढ्ने गरिन्थ्यो । खास गरेर जासुसी उपन्यासहरू ।
जस्तै : इन्टरनेसनल हत्यारा, डेढ फुटको गोली, ब्ल्याकमेलर प्रेमिका, खुनी नेकलेस, कारमा लास, डिटेक्टिभ युवती, अप्रेसन ब्लेंककेट, खतरनाक सुलसुले, ज्यानमारा महारानी, चौंसठ करोडको बंगला, रिवल्भरको कसम, पाइला–पाइलामा हत्या इत्यादि । झन्डै यस्तै–यस्तै टाइटलका सानो चिटिक्क परेको र चित्ताकर्षक कलेवरका पकेट बुकहरू । यसलाई राष्ट्रिय भाषाकरण गरिएर ‘यती जेबी’ पनि भनियो । यस्ता बहुतै लोकप्रिय ‘यती जेबी’का पुस्तकहरू बजारमा ल्याउने व्यक्ति थिए, डाक्टर हेमाङ्ग दीक्षित, ‘यती जेबी’का प्रमुख हर्ताकर्ता डाक्टर दीक्षित आफैं पनि एक कुशल जासुसी उपन्यासकार थिए । सायद ‘यती जेबी’बाट नै प्रकाशित एक जासुसी नोबेल थियो– होटल याङ्कीमा हत्या । यसको रचनाकार मेरा प्रिय मित्र प्रेम कैदी अथवा विजयकुमार चालिसेमध्ये कुनै एक थिए । (अहिले भुलेछु) । जे भए पनि उक्त जासुसी उपन्यासको रोमाञ्च, रहस्य र कौतुहलता गजबको थियो ।
‘यती पब्लिकेसन’बाट पकेट बुक मात्र नभएर ‘यती डाइजेस्ट’ पत्रिका पनि प्रकाशित हुने गर्थ्यो । (अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त अंग्रेसी भाषाको पत्रिका ‘रिडर्स डाइजेस्ट’को पारामा) । यती पकेट बुक र यती डाइजेस्ट । यस प्रकार दोहोरो सफलताको भर्‍याङ छिटछिटो चढिरहेको थियो, यती पब्लिकेसन । एक किसिमले त्यो ‘यती’को जमाना थियो । यद्यपि अहिले पनि ‘यती’को जमाना गइसकेको भन्न मिल्दैन । अँ, यसको नवीन परिप्रेक्ष्य भने फेरिएर पुरै राजनीतिक भएको छ । तर किन हो कुन्नि, निष्कर्षचाहिँ अचम्मैसित आर्थिक निस्कने गरेको छ ! कुनै रहस्यमयी जासुसी आख्यानको लोमहर्षक क्लाइमेक्स जस्तो । (अद्भुत !) यही हो, बहुचर्चित व्यावसायिक फर्म ‘यति होल्डिङ्स प्रा.लि. र यसको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को वर्तमान कमरेड ओली सरकासँगको खुफिया लेनदेनको सम्पूर्ण यतीमयता । हँ, कतै यसैको लेटेस्ट सूचकांकको रूपमा ‘सत्तरी करोडको कमिसन काण्ड’ सतहमा आएको त होइन ?
हाल सत्तरी करोडका पकेट बुके कमरेड गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको असामयिक पटाक्षेप भइसकेको भए तापनि रंगमञ्चमा एकसेएक ‘यती डाइजेस्ट’हरू सशरीर मौजुदै छन् । यिनीहरूका जबर्जस्त डाइजेसन पावरको के बखान गर्ने ? अलिकति पाचन प्रणाली मन्द भएर कमरेड महासचिवले जरुर आठाना फिर्ता गर्नुपर्‍यो । तथापि महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलदेखि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसम्मका सकल कमरेड ‘यती डाइजेस्ट’हरूका साविक बमोजिमको यतीपनमा कुनै अन्तर आएको छैन । यति नै । यतीको कुरा यति नै भए पनि केही थपथाप ।
१. डेढ सप्ताह अघिसम्मका सूचना एवं सञ्चारमन्त्री कमरेड गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका बालकोटस्थित घरबाट एक्कासी बाहिरिएका छन् ।
२. यहीबीच प्रधानमन्त्री कमरेड ओली आफ्नो तेह्रथुमको जन्मघरमा धुमधामले जन्मदिन मनाएर राजधानी, काठमाडौं फर्किएका छन् ।
३. तेह्रथुमको जन्मघरबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री कमरेड ओलीले भूतपूर्व सूचना एवं सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई निर्दोष घोषित गरेका छन् ।
४. के प्रधानमन्त्री कमरेड ओली आफ्नो धर्मपुत्र सरहका कमरेड गोकुलप्रसादलाई तेह्रथुमको खाली घरमा बसाउने मनस्थितिमा त छैनन् ?
प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ ०९:००